आज – २८ बैशाख २०७७ आइतवार को राशिफल – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
आज – २८ बैशाख २०७७ आइतवार को राशिफल
By डिजिटल खबर Last updated May 10, 2020 22 0
वि.सं. २०७७ वैशाख २८। आइतवार। इ.स. २०२० मे १०। ने.सं. ११४० बछलागा। ज्येष्ठ कृष्णपक्ष। तृतीया, ११:३९ उप्रान्त चतुर्थी।
दिगो फाइदा हुने योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ला। काम थाल्न समय लागे पनि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम, दाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। सामाजिक दायित्व पनि बढ्नेछ। तारिफयोग्य कामले लोकप्रियता दिलाउनेछ।
हल्लाको पछि लाग्दा दु:ख पाइनेछ। अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। ऋण, शत्रु र रोगबाट सजग रहनुपर्ला। पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। प्रयत्न गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। परिश्रम परे पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। केही फजुल खर्च बढ्न सक्छ।
समयको मागलाई विचार गरेर अघि बढ्नुहोला। बिस्तारै कर्मयोगले भविष्यको बाटो समाउनेछ। मिहिनेतले काममा सफलता दिलाउन सक्छ। समस्या पन्छाएर अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। शुभचिन्तकहरूको सहयोगले लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। अध्ययनतर्फ समयकाे सदुपयोग गर्न नसकिएला।
परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन नसक्दा काम बिग्रन सक्छ। अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूसँग सावधान रहनुपर्ला। केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। तापनि, मान्यजनको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ।
पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। तर, केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। व्यापारमा सामान्य फाइदा हुनेछ। मिहिनेतले आम्दानी बढाउन सकिनेछ र पछि फाइदा हुने काममा सम्झौता हुन सक्छ। आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ। हिसाबकिताबमा होसियार रहनुहोला।
अवसर पाइनेछ र मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ। श्रमको चित मूल्यांकन होला। पढाइमा प्रगति हुनेछ। व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टामा लाभ मिल्नेछ। दिगो योजना प्रारम्भ गर्ने समय छ। श्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुनेछ। सञ्चित धनको उपयोगले लाभ दिलाउनेछ। प्रतीक्षा गरिएको काम बन्नेछ भने उठ्नुपर्ने रकम पनि हातलागी हुनेछ।
कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ : चिनियाँ दूतावास
परराष्ट्रमन्त्रीलाई संयुक्त विद्यार्थी संगठनले ज्ञापनपत्र र भारतीय दूतावासलाई विरोधपत्र बुझाउने